राजनीति Archives - Page 121 of 122 -
मधेसमा रोकिएन फोरम नेपाल प्रवेशको लहर
पर्सा, ३ कात्तिक । निर्वाचनको मिति नजिकिदै जाँदा तराई मधेसमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा प्रवेश गर्नेहरुको लहर चलेको छ । मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत बुद्धिजीवी र सामाजिक अगुवाहरु पछिल्लो समय फोरम नेपालमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । यही क्रममा शुक्रबार वीरगञ्जमा पाँच जना प्रभावशाली व्यक्तिहरु फोरम नेपालमा प्रवेश ग...
पहाडी भागमा पनि संघीय फोरममा प्रवेशको लहर
काठमाडौं, ३ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका नेता डा कृष्णकुमार राई संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । राईका साथमा माओवादी केन्द्रका नेता दिपक राई र स्वतन्त्र व्यक्ति तोयानाथ पौडेल समेत संघीय फोरममा प्रवेश गरेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल खोटाङ–काठमाडौ सम्पर्क समितिले शुक्रबार तिनकुनेस...
विवेकशिल पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रले थाले चुनावी घरदैलो
The country is begging for change...you have my blessings! (देशले परिवर्तन खोजिरहेछ... तपाईंलाई मेरो आशीर्वाद छ!) -- डा भेषबहादुर थापा आजदेखि घरदैलो अभियान पनि शुरू गरियो। यात्राको अन्तिम विन्दुमा पुग्दा सँगै हिँडिरहेका मित्रले भने, “यो डा भेषबहादुर थापाको घर हो। हुनुहुन्छ कि हेर्ने?” मैले तुरून्तै फोन गर...